Umuthi 'Antistax'. Yokusetshenziswa
Ukulungiselela "Antistax" ngaleyo ndlela kuncishiswe capillary permeability, has angioproteguoe umthelela. isithako - akhiphe ezomile amaqabunga umvini obomvu. izingxenye engeziwe: yensimbi oxide (red yellow), i-nitrous ferric, ama-titanium dioxide, amanzi ahlanzekile, sodium dodecyl sulfate, gelatin, talc, magnesium stearate, dextrose, corn isitashi, anhydrous Silicon dioxide (colloidal).
Medicine "Antistax" ikhiqizwa ngendlela amaphilisi obomvu nonsundu. Ngaphakathi kuqukethwe powder. Okuqukethwe amaphilisi ezinemibala ensundu tinge obomvana ngokunsomi noma okumsulwa umbala onsundu futhi iphunga okuncane eyinqaba.
Amagilebhisi leaf akhiphe iqukethe flavonoid pharmacologically asebenzayo. Phakathi kwabo ezibhekwa izokvertsetin ezinkulu quercetin-glucuronide.
"Antistax" Lezi zibhebhe nethonya zokuzivikela phezu epithelium semithambo (ezisiza ekuqiniseni ulwelwesi), kanye ukwandisa kuyaqina, permeability izindonga kwesejwayelekile. Ngokunciphisa permeability odongeni isitsha kubambezela kumiswa ukuvuvukala entsha bese wehlise akhona.
Umuthi 'Antistax "imiyalelo ukusetshenziswa Kunconywa njengoba ukwelashwa kanye nokuvimbela nesifo esingamahlalakhona emithambo yegazi (ngokuhlanganyela varicose). Izimali nakhelwe nokuqedwa ukuvuvukala, ukusinda, ukukhathala nasemilenzeni uzizwa ukungezwani, ukuba ndikindiki nobuhlungu emikhawulweni aphansi.
Umuthi 'Antistax "imfundo manual ayikuvumeli ukuqokwa uma hypersensitive ukuze izithako zako.
Ngenxa yokungabi nokuhlangenwe nakho emitholampilo ekusetshenzisweni kwezimali e lactating futhi izidakamizwa abakhulelwe ngesikhathi ukuzalwa kanye lactation is hhayi Kunconywa.
Engeziwe izigameko ezingezinhle ezavela izidakamizwa "Antistax" Umsebenzisi Isicelo Amanothi komzimba ezihambisana ngokuvamile nozwelo izingxenye.
Amacala ukweqisa izidakamizwa e umkhuba emtholampilo is hhayi kuchazwe.
Umuthi 'Antistax "yokusetshenziswa Kunconywa ukuthatha ekuseni. Kusho isamba elanele amanzi udakwe.
Abadala ukhombe amaphilisi amabili ngosuku. Ngokuhambisana isimo, uma kunesidingo (ngokuvumelana isincomo udokotela) uvunyelwe ukwandisa umthamo kuya amaphilisi amane.
Endabeni ka kusebenta asanele noma ukuwaphendula zokwelapha ngemva nje kwamasonto ayisithupha yokwelashwa, bonana nodokotela wakho ukuze abone nezinye izimbangela ukuvuvukala, ukusinda noma ubuhlungu.
Umuthi 'Antistax "ochwepheshe musa ukutusa ukusetshenziswa ngoba prophylaxis.
Isihloko bonke imiyalelo kadokotela kusho asibekezeleleki kahle. Nokho, uma imiphumela emibi kudingeka ukuba aye kudokotela.
Lezi zifundo Akabonisanga umphumela lesi sidakamizwa "Antistax" ekhonweni ukwenza imisebenzi ephathelene nokuphathwa kwemishini noma ukushayela imoto. It akuphazamisi ngesilinganiso luhlobo zengqondo, lesiguli motor ukusabela. Nokho, ukuze abone nozwela isiguli ngasinye kufanele lube ngaphambili sizoqala ukwenza imisebenzi yingozi.
Abanye ochwepheshe attribute izindlela "Antistax" izithasiselo begazi. odokotela abaningi bakholelwa ukuthi izidakamizwa kungase kuphumelele kuphela lihambisana nezinye izidakamizwa.
Okukushoyo yokugcina Kunconywa ezingeni lokushisa nanhlanu kuya amabili nanhlanu degrees endaweni eyomile. Dlula umuthi izinyanga ezingamashumi amathathu nesithupha. Emva kwalesi sikhathi it is hhayi Kunconywa ukuthatha.
Ngaphambi kokusebenzisa amathuluzi "Antistax" akufanele ifundwe ngokucophelela imiyalelo ubone udokotela.
"Vagiz": umthengi Izibuyekezo
Ukulungiselela "Lidocaine" (spray)
Ketonal patch ukufudumala: yokusetshenziswa, ukwakheka kanye nokubuyekeza
"Metronidazole" - imiyalelo izidakamizwa kumele kube sobala
Indlela yokwenza ukudla onodoli kusukela materials ususondele?
Ngo yokungezwani komzimba ukuqubuka: ukucinga indikimba yendaba, ukwelashwa, zokuvimbela
I-Obrok uhlobo lentela nokuqashiswa
Impesheni ubuncane eRussia
Umncintiswano eJalimane. Umncintiswano eJalimane 1936
Lomshado Crazy: ukubuyekezwa, sakhiwo, waphonsa
Kwabasebenzi - ingxenye ebaluleke kakhulu ukuphathwa kwenkampani.
Vazelin.Primenenie e sphere ezihlukahlukene zokuphila kwethu
I-Aquarium fish "ummese omnyama": okuqukethwe nokunakekelwa (isithombe)